Libra ee Zodiac qadiimiga ah - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Libra waa kooxda labaad ee zodiac macneheedu waa ‘miisaanka miisaanka’. horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa Sebtembar 24 iyo Oktoobar 23 waxaad tahay Miisaanka. horoscope-ka maanta ayaa haga hantidaada iyo ducadaada sida lagu go’aamiyay taariikhda dhalashadaada ee la xiriirta laba iyo tobanka Calaamadaha Zodiac waxayna ku siinaysaa aragti shakhsi ahaaneed. Xiddigaha casriga ah waxay isticmaashaa horoscope-ka si ay noogu hagto jacaylka dhabta ah (jacaylka horoscope), ama go’aamada dhinaca nasiibka wanaagsan iyo guusha xiriirka, caafimaadka iyo hantida. Laakiin taasi macnaheeda asalka ah miyuu ahaa?
Sawirka xidigta Libra Ma arki kartaa miisaanka dheellitirka?
Miisaanka waa xiddigo ka kooban xiddigo samaysa miisaan ama miisaan. Waa kan sawirka xiddigaha Miisaanka. Miyaad ku arki kartaa ‘miisaanka miisaanka’ sawirkan xiddigaha? Maya
Libra Constellation oo leh xiddigo ku xiran khadadka
Dhab ahaantii, xitaa haddii aan ku xirno xiddigaha ‘Libra’ oo leh xariiqyo, weli way adag tahay in la arko miisaanka. Laakiin calaamaddan miisaanka miisaanku waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha.
Halkan waxaa ah sawirka zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano, oo leh miisaanka Libra oo ku wareegsan casaan.
Dendera Zodiac oo leh Libra goobaabin
Boodhka Zodiac National Geographic ee hoose wuxuu muujinayaa Libra sida lagu arkay Hemisphere Koonfureed. Saddex-xagalka gabi ahaanba uma eka miisaan.
Boodhka National Juqraafiga ee xiddigaha Zodiac. Miisaanka ayaa ku wareegsan casaan
Markaa tani waxay ka dhigan tahay in kooxda Miisaanka ee miisaanka jannada aan laga abuurin xiddigaha laftooda. Halkii, fikradda Miisaanka miisaanka ayaa ugu horreeya. Xiddigo-xiddigleyaashii ugu horreeyay ayaa fikraddan ku dul-saaray xiddigaha si ay u noqoto calaamad soo noqnoqota oo gargaarka xusuusta ah. Dadkii hore waxay farta ku fiiqi karaan kooxda Miisaanka carruurtooda waxayna u sheegi karaan sheekada la xiriirta miisaanka miisaanka. Tani waxay ahayd ujeeddadii asalka ahayd ee xiddigiska.
Qoraaga Kooxda Xidigaha Geeska
Xiddigaha Zodiac waxay si wadajir ah u sameeyaan Sheeko – oo ku qoran xiddigaha. Laakiin yaa qoray sheekadan? Al-Furqaan waxa uu inoo sheegay in Eebbe laftiisa uu sameeyey xiddigaha cirka.
Kitaabkii ugu da’da weynaa ee Baybalka, oo la qoray xitaa Tauratkii Muuse NNKH, wuxuu ahaa Job. Ayuub wuxuu kaloo xusay xiddigaha, isagoo caddeeyay in Ilaah iyaga abuuray:
Isagu waa Sameeyaha orso iyo Orion, ah Dood-wadaag iyo xiddigaha koonfureed.
Haddaba laba-iyo-tobanka calaamadood ee Zodiac waxay sameeyaan sheeko uu bixiyay Abuuraha. Sheekadani waa tii halganka Cosmic ee u dhaxaysa isaga iyo cadawgiisa. Virgo waa cutubka koowaad ee sheekada – Farcanka soo socda naag bikrad ah – oo ku qoran cirka habeenkii si ay dadyowga oo dhan u arkaan.
Qaybta Miisaanka ee Zodiac qadiimiga
Tani waa cutubka labaad ee Sheekadeena. Libra waxay calaamad kale ku sawirtay samada habeenkii ee dhammaan dadyowga. Halkaa waxa aynu ku aragnaa calaamada xaqa Alle. Miisaanka Samadu waxa uu sawiraa xaqnimada, caddaaladda, kala dambaynta, dawladnimada iyo hay’adaha xukunka boqortooyadiisa. Markaa Miisaanka waxa nala horkeenay si fool ka fool ah oo leh cadaalad weligeed ah, miisaanka ciqaabta dembigayada iyo qiimaha madax furashada. Suuradda Al-Qaariah waxay isla xukunka bixisay marka ay ka hadlayso dheellitirka camalka wanaagsan oo lagu miisaamay heerka samada.
Ruuxiise uu fududaado Miisaankiisu.
Wuxuu gurigiisa ku yeelan doonaa god (hoos aan hoose) lahayn.
Nasiib darro, xukunku naguma habboona. Xiddiga ugu iftiimaya wuxuu ku yaalaa cududda sare ee dheelitirka – dheelitirka camalkeena wanaagsan ayaa lagu muujiyay iftiin sida Al Qariyah ayaa ka digay.
Zabuurna wuxuu ku dhawaaqay xukun isku mid ah.
Hubaal dad gun ahu waa xumbo,
Sabuurradii 62: 9
Calaamadda xiddigiska ee Miisaanka ayaa la siiyay si ay na xasuusiso in dheellitirkeena camalku aanu ku filnayn. Caddaaladda Boqortooyada Ilaahay, dhammaanteen waxaa la helayaa in ay leeyihiin dheellitirka camalka wanaagsan oo miisaankoodu yahay inta neefta ah – yaraan iyo ku filan.
Laakiin rajo la’aan ma nihin. Sida arrimaha bixinta deynta iyo waajibaadka, waxaa jira qiimo dabooli kara mudnaan la’aantayada. Laakin ma ahan qiimo fudud in la bixiyo. Zabuur ayaa ku dhawaaqay
Waayo, furashada naftoodu waa qaali aad iyo aad,
Kumana filna weligeedba,
Sabuurradii 49: 8
Sida Nabi Ayuub wuu garanayay madax furashadiisa oo isku dheeli tiri lahaa deyntiisa jannada ka hor, sidoo kale Calamadaha Zodiac waxay ina tusayaan sida aan u ogaan karno madax furashadan oo naga caawin kara baahidayada.
Horoscope-kaaga Libra ee Zodiac-kii hore
Maadaama Horoscope-ku uu ka yimid Giriigga ‘Horo’ (saac) oo qoraallada nebiyadu ay calaamad u yihiin saacadaha muhiimka ah ee annaga, waxaan ogaan karnaa ‘saacdooda’ Miisaanka. Miisaanka horo akhrinta qoraalladan waa:
laakiinse markii wakhtigii buuxsamay, Ilaah wuxuu soo diray Wiilkiisii, isagoo naag ka dhashay oo sharciga ku hoos dhashay, 5 inuu furto kuwii sharciga ku hoos jiray inuu carruurtiis inaga dhigo.
Galatiya 4: 4-5
Isagoo sheegaya ‘waqtigii loo qabtay si buuxda buu u yimid’ Injiilku wuxuu noo calaamadiyey ‘horo’ gaar ah oo aannu akhrinno. Saacadani kuma salaysna saacada aad dhalatay ee waxay ku salaysan tahay saacad loo dejiyay bilowga wakhtiga. Isagoo sheegaya in Isa al Masih NNKH uu ‘Naag ka dhashay’ waxay tilmaamaysaa Virgo iyo farcankeeda.
Sidee ayuu ku yimid?
Wuxuu ku yimid ‘sharciga’. Wuxuu hoos yimid miisaanka Miisaanka.
Muxuu u yimid?
Wuxuu u yimid inuu naga furto kuween ‘sharciga hoos yimaada’ – miisaanka Miisaanka. Kuweenna u arka miisaankeenna camal aad u fudud – wuu soo furan karaa. Tan waxa raacaya ballan qaadkii ‘korsashada wiilnimadii’.
Akhriska Horoscope kaaga
Adiga iyo aniga waxaan codsan karnaa akhrinta horoscope-ka Libra-ka maanta anagoo raacayna hagida soo socota.
Libra waxay ina xasuusinaysaa in raadintaada hantida ay si fudud u noqon karto hunguri, raadinta cilaaqaadkaagu waxay si dhakhso ah kuugu keeni kartaa inaad dadka kale ula dhaqanto sidii wax la tuuri karo, waxay u badan tahay inaad dadka ku tumanayso markaad raadinayso farxad. Libra waxay noo sheegaysaa in sifaadkan oo kale aysan la socon karin miisaanka xaqnimada. La xisaabtan hadda waxaad samaynayso nolosha. Ka digtoonow maxaa yeelay Miisaanka iyo Kutubtu waxay nooga digayaan in Allaah uu soo gelin doono camal kasta oo ay ku jiraan wax kasta oo qarsoon.
Haddii dheelitirkaagu camalkiisu aad u fududaado maalintaas waxaad u baahan doontaa Bixiye. Baadh dhammaan xulashooyinkaaga hadda laakiin xusuusnow in Abuurka Virgo uu u yimid si uu kuu soo furto. Isticmaal sifada uu Ilaahay ku manaystay si aad u dareento saxa iyo khaladka noloshaada. Waxa ‘korsashada’ ka dhigan tahay akhriska horoscope-ka Miisaanka waxa laga yaabaa inaanay caddayn wakhtigan, laakiin haddii aad sii waddo inaad maalin walba waydiiso, garaac oo raadiso wuu ku hoggaamin doonaa. Tan waxa la samayn karaa wakhti kasta oo maalin kasta ah, usbuucaaga oo dhan.
Miisaanka & Scorpio
Sawirka Miisaanka ayaa isbeddelay ilaa bilowgii taariikhda aadanaha. Sawirada hore ee xiddigiska iyo magacyada loo bixiyay xiddigaha Miisaanka waxaan ku aragnaa ciddiyihii Scorpio oo gaarayay inay fahmaan Libra. Xiddiga ugu dhalaalaya Zubeneschamali, wuxuu ka yimid weedha Carabiga al-zuban al-Shamāliyya, oo macnaheedu yahay “cidida woqooyi”. Xiddigta labaad ee ugu dhalaalaysa Libra, Zubenelgenubi, waxay ka timid weedha Carabiga al-zuban al-janubiyy, oo macnaheedu yahay “cididii koonfureed.” Labada ciddi ee Scorpio waxay ku qabsanayaan Libra. Taasi waxay daaha ka qaadaysaa halganka wayn ee u dhexeeya labadan mucaarid. Sida halgankani u qabsoomo ayaanu dib u eegis ku samayn doonaa Scorpio. Si aad u fahanto sheekada Zodiac bilawgeedii eeg Calaamada Virgo.